IPhone-kaaga ma dib ayuu u bilaabmaa habeenkii? Waxaan ku baraynaa sida loo xaliyo | Wararka IPhone
Jailbreak waxay keeneysaa dhibaatooyin xasilooni leh, sidaa darteed, munaasabadaha qaarkood kuma talineyno inaad ku sameysid aaladaha iOS ee lagama maarmaanka u ah fulinta howlaheena xirfadeed ama maalinlaha ah. Mid ka mid ah cilladaha soo noqnoqda ee ka dambeeya Jeel-jabkan cusub ayaa ah in qalabku si aan kala sooc lahayn dib ugu hawlgalo saqda dhexe ee habeenka, dad badan oo adeegsadaana ay helaan markay soo toosaan inay galaan lambarrada amniga. Si kastaba ha noqotee, Haddii taleefankaaga iPhone-ka uu sidoo kale ka cabanayo dhibaatada dib u bilaabista habeenka, waxaan ku tusi doonnaa sida si fudud loogu xalliyo casharradan. Soo gal oo waxaan ku tusi doonaa sida, waxaad arki doontaa sida ay u fududahay.
Marka ugu horreysa, ha argagixin, waa wax caadi ah in la helo waxqabadka noocan oo kale ah iyo cilladaha nidaamka ee qalabka ay soo wajahday Jailbreak, waa wax iska caadi ah, nidaamka waa laga beddelay caloosha, iyo gaar ahaan ka dib markii la rakibay waxyaabo badan oo isbeddel ah, waxay ayaa ka weyn fursadaha dhibaatooyinkaan soo bixi kara.
Sida loo xaliyo dhibaatada reboots-ka habeenki
Waxaan u galnaa Cydia si caadi ah, sida had iyo jeer.
Waxaan ku dari doonnaa kiiskan meel lagu keydiyo, dhexdeeda waxaa ku jira tweak oo naga caawin doonta inaan si fudud u xallino dhibaatadan. Dhagsii «Ilaha» ka dibna ku dar «Add».
Waxaan ku darnaa cinwaanka soo socda: http://codyqx4.github.io/cydia »(Xigasho la’aan) oo guji ku dar.
Waxaan sugeynaa ilaa keydka lagu daro oo Cydia ay cusbooneysiiso.
Hadda waxaan aadeynaa howsha baaritaanka oo waxaan ku soo qaadaneynaa «macruufka 9 Reboot Fix«.
Waxaan fureynaa xirmada waxaanna hubineynaa inay tahay tan aan raadineyno, ka dib waan soo dejineynaa oo aan ku rakibeynaa sida wax kasta oo kale oo tweak ah.
Marka aan dhammeyno rakibidda khafiifka, dhibaatooyinka soo noqoshada habeenkii ee qalabkeenna waa in la xalliyo. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in isbeddelka uusan ka shaqeyneynin 100% kiisaska, laakiin kiisaska badankood. Haddii ay dhacdo in taadu ay dib u bilowdo, waxaan kugula talineynaa inaad dib u soo celiso qalabka oo aad dib uhesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » IPhone-kaaga ma dib ayuu u bilaabmaa habeenkii? Waxaan ku baraynaa sida loo xaliyo
Noce maxay cinwaanka macnaheedu tahay… hahahah iPhone-kaaga ma dib ayuu u bilaabmaa habeenkii? ' Taasi waa sax 🙂
Haa, wuu xukumaa habeenkii, markaan jiifo, markaan jiifo, waxaan ku dhacaa sariirta.
Ku jawaab YEKA
Jawaab Bobby Dillon
Waxaan ordi jiray 9.0.2 habeen kasta ...
Laakiin hadda igama sii dhacayso aniga 9.3.3
Sikastaba maskaxda ayaan ku hayn doonaa
Iphone 3g ilaa 6s with jailbreak jamas aniga ayaa dib la ii bilaabay habeenkii, maalin, iyo galab iyo wax toona, sidaa darteed Maya, ma ahan wax caadi ah mana ahan wax xiriir la leh JAILBREAK
Boqolaal warbaahin iyo goleyaal horumarineed ayaa ka dhawaajiyay dhibaatadan, illaa heer ay leedahay isbadal u gaar ah. Haddii ay dhacdo uma muuqato sabab ku filan oo wanaagsan oo lagu caawiyo kuwa dhibaatada la soo daristay.
Waxaan ku faraxsanahay inaadan u baahnayn inaad isticmaasho casharradan.
Miyaan ku idhi casharradu cidna ma caawinayso? Kaliya waxaan idhi waligay iguma dhicin lamana arkin inkasta oo aan haysto dhowr iPhone oo jailbroken.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inuu jiro tweak ka caawiya kuwa dhibaatadaas qaba.
Waxaad tiri caadi maahan, hada ha iila imaanin dhanka difaaca. Waxaad qaadatay wham, doqonimo.
Waad salaaman tihiin, aniga ayey igu dhacday aniga oo aan waligey jebin
Jawaab Jordi L.
Ku jawaab Kyroblanck
Anigu waxaan isku maaweeliyaa macdanta ee kama haysto taleefanka
Waxaan arkaa in qaar badan ay ku qaataan qosol laakiin waxay igu dhacday aniga Jebilkan markii aan soo toosay waa inaan dib u cusbooneysiiyaa arjiga maxaa yeelay dib ayey u bilaabantay habeenkii
Waan arki doonaa haddii tani xallinayso dhibaatadayda.
Waxay igu dhacdaa aniga x ugu yaraan dhowr jeer usbuucii (IOS 9.1 oo leh Jailbreak)
Dhamaan waad salaaman tihiin. Waxaan Jeelbroken haystay sanado badan hada, in kasta oo aan hakad ugu jiro nacasnimo iyo jahli sanado ka hor doonayay inaan cusbooneysiiyo iyo ..., si fiican markaan u gaaro barta, waxaan hayaa iPhone 5S oo leh iOS 9.0.2 oo leh Jailbreak tan iyo markii ay tani ku soo baxday macruufkayga oo aanan waligay nidaamka soo dirin, laakiin ka dib markii xabsiga laga sii daayay ee macruufka 9.3 ka soo baxay ... dib u bilaw oo sifiican ayey kor ugu kacdaa, laakiin waxaan si aan kala sooc lahayn ugu sameynayay Sidan oo kale oo ay igu dhibtay wax badan oo ah in la tijaabiyo haddii ay ahayd khalad gaar ah, waan tirtiray "Cydia Substrate" oo waxaan si lama filaan ah u tirtiray dhammaan isbeddelkeyga marka laga reebo barnaamijyadooda sida xaddidan iyo wixii la mid ah oo aan khalad ahayn. dhibna kalama kulmin markale, laakiin dareenkeyga waxaan ku dhowaad 100% hubaa in dhibaatooyinku leeyihiin qaar ka mid ah isbedellada aan u adeegsan jiray sannado oo dhawaanahan la cusbooneysiiyey si ay ula jaanqaadi karaan jahwareerka ugu dambeeya (Jeel aan dhammaystirnayn .. . lol) JAILBILLY oo la heli karo kaas oo isku xiraya JAILBILA ... Haddii qof i xiriiri karo xiriiriye qoraalkan oo ku saabsan liiska isbeddelada la iibsan karo ee la cusbooneysiinayo, waxaan u maleynayaa inay tahay liis Google Drive ah. Fadlan, waan qaddarin lahaa.